ग्यारेन्टीको साथ ग्रामीण घर भाँडामा दिनुहोस् - तपाईले के हेर्नु पर्छ? | Absolut यात्रा
ग्यारेन्टीको साथ ग्रामीण घर भाडामा हेर्न तपाईंले के हेर्नु पर्छ
सुसाना Godoy | | अरूलाई
तिमीलाई थाहा छ ग्यारेन्टीको साथ ग्रामीण घर भाडामा हेर्न तपाईंले के हेर्नुपर्दछ? यो बिन्दुमा राम्रो छनौट गर्न सक्षम हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनकि आवासले हाम्रो छुट्टीको परिणामबाट जोड्न वा घटाउनेछ। मुख्य अंशको रूपमा, हामी हाम्रो गार्ड कम गर्न सक्दैनौं र हामीले क्रमबद्ध चरणहरू विचार गर्नुपर्दछ।
त्यसकारण यदि तपाईंलाई अझै कहाँ थाँहा थाँहा छ भनेर थाहा छैन भने, तिनीहरूको सारांश यहाँ छ। त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले सबै खर्च गर्न ग्रामीण घर छान्छन् तपाइँको छुट्टी को दिन। एक प्रतिशत जुन प्रत्येक वर्ष थप पर्यटक थपिएको छ। त्यसोभए यसले चोट पुर्‍याउँदैन कि तपाईं १००% मजा लिन यी साधारण सल्लाहहरू पालना गर्नुहुन्छ।
1 ग्यारेन्टीसहितको ग्रामीण घर भाडामा लिन तपाईंले के हेर्नुपर्दछ, मूल्यहरू
2 विश्वसनीय पृष्ठहरूमा सँधै शर्त लगाउनुहोस्
3 छविहरु संग सावधान रहनुहोस्
4 सबै खर्चहरू भाँडामा लिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुहोस्
5 के मालिकलाई भाँडामा छ वा मध्यस्थलाई?
6 यदि तपाईंलाई शंका छ भने कहिले पनि करारमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्
7 तपाइँ कसरी भुक्तानी गर्नुपर्छ
ग्यारेन्टीसहितको ग्रामीण घर भाडामा लिन तपाईंले के हेर्नुपर्दछ, मूल्यहरू
सर्वप्रथम, यो सत्य हो कि मूल्यहरू हामी प्रायः हेर्दछौं र समीक्षा गर्छौं। के आवश्यक छ विभिन्न पृष्ठहरूमा तिनीहरूलाई तुलना गर्न। यद्यपि यो एक साधारण कार्य जस्तो देखिन्छ, यो सजिलो छैन। किनभने यदि तपाईं वास्तवमै कम मूल्य देख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि हामी पहिले नै अविश्वास गर्न थाल्नेछौं। साथै, जब हामी अरूलाई भेट्छौं कम मूल्यहरू हामीलाई प्रदान गरिएको सबैको लागि तिनीहरू सामान्यतया कडा शर्तहरूको अधीनमा हुन्छन्। त्यसोभए यो त्यस्तो होइन कि तिनीहरूले हामीलाई धेरै चासो दिए। त्यसो भए, पहिलो पोइन्ट बिभिन्न मिडियामा खोजी गर्नु हो, मूल्यहरू र सबै विकल्पहरू लेख्नुहोस् जुन हामीलाई ती मूल्य दिन्छ। ती सबै विज्ञापनहरू पास गर्न सम्झनुहोस् जुन कम मूल्य हुनुको साथै ग्रामीण फोटोहरू देखाउँदै बिभिन्न फोटोहरू हुँदैन।
विश्वसनीय पृष्ठहरूमा सँधै शर्त लगाउनुहोस्
जब हामी सामान्य पृष्ठहरूमा हामीले खोजिरहेको कुरा भेट्टाउँदैनौं, हामी प्राय: राम्रो मूल्यको खोजीमा अरूमा जान्छौं। तर यो सबै गल्ती हुन सक्छ। किनभने कहिलेकाँही हामी भेट्छौं कि हामी भित्र छौ कम विश्वसनीय प्लेटफार्महरू। त्यसकारण हामी सधैं निश्चित शटमा जानुपर्दछ, हामी सबैलाई थाहा भएको आधारभूत पृष्ठहरूको साथ। थप रूपमा, तिनीहरूले तपाईंलाई स्थान, मिति प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ र तिनीहरूले मूल्य तुलनाको साथ प्रतिक्रिया गर्नेछन्। त्यसोभए त्यहाँबाट हामी जान्न सक्दछौं जुन हाम्रो लागि सब भन्दा राम्रो हो।
छविहरु संग सावधान रहनुहोस्
यो सत्य हो कि केही स्थानहरूमा हामी स्थानको केही जोडी प्रस्तुत गर्दछौं र यो अचम्मको देखिन्छ। हामी सम्झन्छौं कि एउटा दृश्य वा राम्रो प्रकाशले पनि हामीले सोचे भन्दा अधिक गर्छ। यो सत्य हो कि हामी सजावटको बारेमा वा कोठा कसरी वितरण गर्ने बारे धेरै मतलब गर्दैनौं तर हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहान्छौं कि आराम गर्न सक्षम हुनको लागि हामी सबै कुरा व्यवस्थित, सफा ठाउँमा हुनेछौं। तसर्थ, जब तपाईं आफ्नो गन्तव्य चयन गर्नुभयो, यो सधैं उत्तम हुन्छ। विज्ञापनदातालाई सम्पर्क गर्नुहोस् र अधिक चित्रका लागि सोध्नुहोस्। उही बाटोमा, यस स्थान र तपाईंको वरिपरिको सबै कुरा निश्चित गर्न नबिर्सनुहोस्।
सबै खर्चहरू भाँडामा लिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुहोस्
यो सत्य हो कि केहि पृष्ठहरूमा हामी ग्रामीण घरको मूल्य देख्छौं। तर सायद अझै काट्नु उसको वरिपरि अझै कपडा छ। यसले हामीलाई बताउँछ कि हामीले पहिला सोध्नु पर्छ कि त्यहाँ वेबसाइट वा एजेन्सीहरूबाट कमिशनहरू छन् कि छैनन्। अर्को तर्फ, यो मूल्य को एक ब्रेकडाउन को लागी मा चोट लाग्दैन, तिनीहरूले स्थान मा यसको रहन को लागी दर वा यसको ग्यारेन्टी र सफाई पनि। यी सबै विवरणहरू कुनै प्रकारको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि स्पष्ट गर्नुपर्दछ।
के मालिकलाई भाँडामा छ वा मध्यस्थलाई?
किनभने यो उस्तै देखिन्छ, OCU ले भन्छ, यो त्यस्तो छैन। हुनसक्छ केही नहोस्, तर हामीले सधैं आफ्नो पछाडि राम्रोसँग जोगाउनु पर्छ। यदि तपाईं गर्नुहुन्छ एजेन्सी मार्फत प्रक्रियाहरू, प्रत्येक प्रयोगकर्ता उपभोक्ता कानून द्वारा कभर गरिएको छ। जबकि यदि भाडा निजी व्यक्तिलाई बनाइएको छ, तब हामीलाई के सहयोग गर्ने सामान्य भाँडा कानून हुनेछ। यद्यपि यो सत्य हो कि यो सबै स्थानमा निर्भर रहन्छ।
यदि तपाईंलाई शंका छ भने कहिले पनि करारमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्
कहिलेकाँही यो सत्य हो कि श doubts्काले हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ र हाम्रो छुट्टीहरूमा बढी। तर यदि त्यसो हुन्छ भने हामीले पहिले त्यसलाई स्पष्ट गर्नु पर्छ। तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ के बुकिंग सर्तहरू तर रद्द पनि। हामीले पहिले नै भनेजस्तै, तपाईंले मूल्य पनि बन्द गर्नुपर्दछ र क्षेत्रको बारेमा अलि बढी जान्नुपर्दछ। किनकि ती विवरणहरू हुन् जुन हामी उनीहरू बाँचुन्जेल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। केवल जब तपाईं पूर्ण रूपमा निश्चित हुनुहुन्छ, यो हस्ताक्षर गर्ने समय हुनेछ।
तपाइँ कसरी भुक्तानी गर्नुपर्छ
यदि तपाईंले आफ्नो सोच बनाइसक्नु भएको छ भने, तब निश्चित रूपमा तिनीहरूले तपाईंलाई भुक्तानीको लागि सोध्छन् र सायद एक निक्षेप पनि। यस अवस्थामा तपाईले यसलाई सँधै सुरक्षित ठाउँमा गर्नु पर्दछ। प्लेटफर्मले निश्चित रूपमा तपाइँलाई यो गर्न कहाँ बताउने छ। सबै भन्दा राम्रो पेपैलको साथ साथै कार्ड वा स्थानान्तरण मार्फत हो। हामीलाई चाहिने चीज भनेको हामीले पठाउँदै गरेको पैसाको रेकर्ड हो। सँधै एउटा प्रतिलिपि राख्नुहोस् र कुनै असुविधा हुन सक्ने अवस्थामा फोन नम्बर सोध्न पनि सम्झनुहोस्। सबै भन्दा राम्रो हो पूरा रकम तिर्ने छैन जब सम्म तपाईं स्थानमा पुग्नुहुन्न। त्यस प्रकार हामी घटनामा यति धेरै हराउने छैनौं कि समस्याहरू खडा हुन्छन्। निश्चित रूपमा एक सानो सावधानीका साथ, छुट्टिहरू गोल हुनेछ! यी सबै चीजहरू तपाईले ग्यारेन्टीको साथ ग्रामीण घर भाडामा हेर्नुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » ग्यारेन्टीको साथ ग्रामीण घर भाडामा हेर्न तपाईंले के हेर्नु पर्छ